Momba anay - Yangzhou Wooten Scaffold Co., Ltd.
Xinxin Group dia natsangana tamin'ny 2003, ny vondrona dia miorina ao amin'ny Tianshan Town Industrial Park, North Suburb of Yangzhou City, faritanin'i Jiangsu, manarona faritra 500 hektara, ny mpiasa efa misy olona 800 mahery, ny orinasa dia niorina tamin'ny voalohany ny orinasa mafana mandetika galvanizing, rehefa vita ny fandrosoana sy ny fitomboana mihoatra ny 10 taona, ankehitriny dia tarika galvanisin'ny fikambanan'ny fikambanan'i Shina。 Miorina amin'ny fanodinana galvanizing mafana sy famokarana singa vy miendrika endrika manokana toy ny tilikambo herinaratra, fantsona tilikambo, takelaka vy, scaffold, tsato-jiro, tsato-kazo famantarana, fantsom-pitaovana herinaratra, kojakoja vy, zana-kazo, fantson'ny fantson-tsambo, sns. Tamin'ny taona 2016, Wooten Scaffold Co., Ltd. dia natsangan'ny Vondrona, izay miasa indrindra amin'ny famokarana sy fivarotana scaffolding karazana tehaka. Ny salan'isan'ny famokarana isan'andro dia 1000 taonina, miara-miasa amin'ny orinasa fampanofana lehibe sy fananganana lehibe any amin'ny demôtika sy any ampitan-dranomasina.
Ny orinasa dia tohanan'ny ekipa matanjaka amin'ny famolavolana sy ny teknolojia departemanta miandraikitra ny scaffold famolavolana vaovao sy ny formwork vokatra amin'ny fanaingoana araka ny fampiharana tetikasa hafa.
1. Fanamboarana - Ho an'ny volavolan-tsokajy namboarina mifanaraka amin'ny fepetra takiana tsy manam-paharoa, manana dingana mirindra izay hiantohana ny mpanjifa rehetra hahazo ny rafitra ilain'izy ireo.
2. Politika momba ny kalitao
Nahazo mari-pahaizana momba ny kalitao ISO 9001 miaraka amina zavatra mahazatra izahay ary nandalo fitsapana henjana tamin'ny GB12142-2007, ary nandalo ny fanaraha-maso momba ny fanaraha-maso ny asa sosialy nataon'ny orinasa SGS Auditing Company. Ny vokatra aondrana sasany dia novokarina sy notsapaina araka ny fenitra iraisampirenena toa ny fenitra Aostralianina sy Nouvelle Zélande AS / NZS, fenitra Eoropeana EN, fenitra ANSI Amerikanina miaraka amin'ny fanamarinana navoakan'ny maso ivoho SGS / TUV sns.
3. Tonga lafatra ny indostria. Wooten Scoffold dia tsy scaffold ihany, fa manana galvanizing mafana ihany koa, ka ny kalitao dia azo fehezina tsara kokoa.